Filtrer les éléments par date : samedi, 27 juin 2020
samedi, 27 juin 2020 19:43
Ambohitompoina-Antanifotsy: Telo lahy tra-tehaka nanaparitaka vola sandoka
Teo ampividianana sigara no tra-tehaka izy ireto. Vola 20 000 Ariary sandoka no natolotr’izy ireo ny harivan’ny 25 jona 2020. Efa mailo ny mpivarotra ka teo no niainga ny fahatrarana azy ireto. Mbola nahitana 20 000 Ariary sandoka miisa fito tany amin’izy ireo rehefa nosavaina. Nogiazana ihany koa ny « moto cross » fitondran’izy ireo mivezivezy manao ity asa ratsy ity.
Nentina ao Antanifosy izy ireo atao fanadihadiana.
samedi, 27 juin 2020 19:07
Ikalamavony: Basy vita gasy 130 isa no tafaverin’ny mpitandro filaminana
Nahitam-bokany ny fanentanana ny mponina tao amin’ny Distrika Ikalamavony hamerina ny basy tsy ara-dalàna eny ampelan-tanany hamerenana amin’ny laoniny ny fandriampahalemana. Basy vita gasy miisa 130 no efa tafaverina, ka ny 40 tao amin’ny « Poste Avancé » Mangidy, ny 36 tao Solila, ny 20 tao Ambatomainty, ny 18 tao amin’ny brigadin’i Fitampito ary ny 16 tao amin’ny brigady Ikalamavony.
Mitohy ny fikarohana ireo basy tsy ara-dalàna.
samedi, 27 juin 2020 18:58
Ambovombe Androy: Delegem-panjakana roa voarohirohy amin’ny famotsian’omby
Omby miisa 94 no tsikaritry ny Zandary nandritra ny fisafoana tsenan’omby natao teto Ambovombe ny 22 jona 2020 fa tsy ara-dalàna ny taratasy nasehon’ny mpivarotra omby teto amin’ny fivarotan’omby.Nampidirina « fourrière », ary nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Zandary.
Tao anatin’izany no nahitana FIB (Fiche Individuelle de Bovin) izay efa voafeno sy voasonia mialoha, nefa ny omby hosoratana eo sy ny mividy ilay omby mbola tsy fantany akory. Delegem-panjakana miisa roa no voarohirohy amin’ity famotsian’omby ity, ary natolotra ny Fampanoavana eto Ambovombe.
samedi, 27 juin 2020 18:23
Covid-19: Fitiliana 700 000 isan-kerinandro no atao ao Frantsa
Mba hisorohana ny fiverenan'ny firongatra faharoan'ny valanaretina Covid-19 dia manao filiana eny amin'ireo faritra ahiana mbola mety hiaingan'ny aretina ny any Frantsa.
Fitiliana maimaim-poana 700 000 isan-kerinandro eo no atao amin'izany.
Fantatra araky ny tantaran'ny valanaretina rehetra amin'ny ankapobeny fa ny firongatra faharoa, raha misy, no tena mahafaty miohatra amin'ny fiparitahana voalohany, satria manomboka midina ny fifehezan-tenan'ny mponina rehefa afaka ny fiparitahana voalohany.
Izay tranga izay indrindra no anaovana fitiliana faobe amin'ireo faritra mbola ahiana, satria tsy zakan'ny toe-karena, ary mety tsy hanaiky intsony ny mponina raha hanao fihibohana faobe fanindroany.
samedi, 27 juin 2020 18:11
Ambohipo – Manandriana: Narian’ny dahalo ny basiny, aleony nitsoaka nanavotr’aina
Nanaovan’ny Zandary avy amin’ny brigady Manandriana sy ny avy ao amin’ny « Poste Avancé » Talata Vohimena nampian’ny andrimasompokonolona Lambamena angaredona ny fandravana andian-dahalo nitoby tao amin’ny kizo Antety Zanadambo Kaominina Ambohipo, Distrika Manandriana araka ny fanomezam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo.
Teo ampandrahoana sakafo ireo dahalo no tonga ny Zandary, ny atoandron’ny 24 jona 2020. Nanapoaka basy ireo dahalo vao nahatazana ireo Zandary nanantona. Nisy ny fifampitifirana. Vaky nandositra any anaty ala kesika ireo dahalo ka tavela teo an-toerana ireo fitaovam-piadiana teny an-tanan’izy ireo, nahitana basy mahery vaika sy bala, antsy lava ary « plaque solaire ». Tsy nisy tohina ny avy amin’ny mpitandro ny filaminana sy Lambamena.
Ity no basy mahery vaika faha-12 azon’ny Zandary hatramin’ny janoary 2020.
samedi, 27 juin 2020 17:51
Andranoboaka Atsinanana: Lavon’ny Zandary i Bema, dahalo raindahiny
Dahalo mpamerin-keloka, raindahiny amin’ny halatr’omby, fanolanana ary fanafihana mitam-piadiana amin’iny manodidina ny Antampon'Ihorombe i Bema. Lavon’ny balan’ny Zandary nandritra ny fifandonana tao Ankerika ity farany ny 24 jona teo. Tavela ny basy sy ny bala teny an-tanany.
Voalaza fa isan’ireo nandray anjara tamin’ny fanafihana nitranga tao Fandana ny 16 jona teo ity dahalo ity.
samedi, 27 juin 2020 17:30
Ivondro - Midongy Atsimo: Nitrangana halatr’omby nahafatesana olona miisa roa
Lasan’ny dahalo ny alin’ny 23 jona 2020 teo ny omby miisa 14, tao Antanasoa Fokontany Marozano, Kaominina Ivondro, Distrika Midongy Atsimo.
Roso tamin’ny fanarahan-dia ny Fokonolona nampian’ny Zandary. Nisy ny fifandonana rehefa nifankatratra tao Mananeno Fokontany Lavaraty. Maty tamin’izany ny roa tamin’ireo Fokonolona nanaradia.
Nanohy ny diany niazo ny Distrika Iakora ireo dahalo nandroaka ny omby. Mitohy ny fikarohana azy ireo.
samedi, 27 juin 2020 16:49
Fandriampahalemana: Mpimasy miisa 25 no efa tratra manerana an'i Madagasikara ka ny 15 maty voatifitra
Miisa 25 izao ireo Mpimasy mpampandro dahalo no efa tratra manerana an'i Madagasikara, 15 maty voatifitra fa nikiry nandositra raha vao nisy irika nahafahany nanao izany ka anisan’ireo i Dony mpimasy mpanao ody bala, izay vaosambotra niaraka tamin’ny vadiny tao Ambohitrarivo Fokontany Ankaiafo Sud, Kaominina Antanimenabaka, Distrika Andilamena, nandritra ny fisafoana nataon’ny Zandary ny 22 jona 2020 lasa teo. Nisy basimborona sy bala tratra niaraka taminy ankoatra ny ody gasy.
Dony no mpimasy faha-13 voasambotra, ary faha-6 tamin’ireo maty voatifitra tao anatin’ny Vondrotobim-pileovan’ny Zandarimaria Ambatondrazaka hatramin’ny fiandohan’ity taona 2020 ity.
samedi, 27 juin 2020 13:34
Covid-19: Miisa 40 000 ireo voa tao anatin'ny 24ora any Etats-Unis
Mitombo hatrany ireo voamarina mitondra ny otrik'aretina Covid-19 any Etats-Unis. Nahatratra 40 000 ireo voa tao anatin'ny 24ora.
Ireo tanora no tena maro amin'izany noho ny tsy fanarahana ny fanaovana takom-bava, ny tsy fanajana ny elanelana.
Ireo fanjakana, Etat, mpomba ny Filoha Donald Trump no tena tratra, satria izy ireo nametraka ny toe-karena ambonin'ny zavatra rehetra, ka tsy naka ny fepetra fihibohana, na ireo fepetra elanelana sy tako-bava, hanajana ny zo fototra amerikanina dia ny "fahalalahan'ny olom-pirenena"
Manahy ireo mpitondra ny hiakaran'izany hatrany amin'ny fahatongavan'ny fetim-pirenena amerikanina ny 4 jolay, izay andro fety lehibe any an-toerana, ka hifaneraseran'ny fianakaviana maro manodidina ny kihendihendy sy kitonotony Barbecue independence day.
samedi, 27 juin 2020 12:08
Orly: Misokatra ho an'ny Eoropa ny sidina
Nanomboka ny zoma 26 jona dia nisokatra ny sidina mampitohy ireo firenena eoropeanina, niainga tao Orly France.
Nikatona nandritra ny 3 volana ity seranam-piaramanidina ity noho ny fiarovana amin'ny fihanaky ny valanaretina Covid-19.
70 ireo fiaramanidina niainga omaly zoma 26 jona, raha 600 isan'andro izany amin'ny andavanandro. 8000 ireo mpandeha omaly, raha 90 000 isan'andro teo aloha, 10% miohatra amin'ny andavanandro.
Ny kaompania Transvia no nanainga voalohany ho any Porto, tanàna iray avaratra andrefan'i Portugal, tamin'ny 6ora25 minitra, ary notondrahana rano araky ny fomba eo amin'ny famoivoizana ara-piaramanidina, "water salute".